खेलकुद Archives - Page2of 8 - Himali Patrika
८ साउन २०७८, 7:01 am
काठमाडौँ । कतार अहिले २०२२ मा हुने फुटबल विश्वकपको तयारीमा जुटेको छ । २०२२ को नोभेम्बर र डिसेम्बरमा हुने विश्वकपका लागि कतारले विशेष तयारी गरिरहेको छ । कतारले विश्वकपक लागि ८ ठुला स्टेडियम बनाएको छ…
२० असार २०७८, 5:59 am
काठमाडौं । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग क्लब न्यूरोड टिम एनआरटीले दुई अफ्रिकन खेलाडीलाई अनुबन्धित गरेको छ । एनआरटीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोसुके ओलुमो र स्टेफेन समिरलाई अनुबन्धित गरिएको जनाएको छ । चार पटकको…
मेसीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई हरायो
१५ असार २०७८, 8:51 am
कोपा अमेरिकामा लिओनल मेसीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेसँगै अर्जेन्टिनाले बोलिभियामाथि सानदार जित निकालेको छ। मंगलबार बिहान सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिनाले ४-१ गोलको जित निकालेको हो। खेलको छैठौं मिनेटमा गोमेजको गोलबाट अर्जेन्टिनाले खेलमा अग्रता लियो। उनलाई गोल गर्न…
७ असार २०७८, 3:55 pm
युरोकप २०२० अन्तर्गत शनिबार राति जर्मनी र पोर्चुगलबीच ६ गोलको रोमाञ्चक खेल भयो । सम्भवतः यो खेल चालू युरोकपको समूह चरणकै रोमाञ्चक खेल बन्यो होला । पोर्चुगलका दुई डिफेन्डरले आत्मघाती गोल गर्नु, जर्मनीले साबिक विजेतामाथि सनसनीपूर्ण ४–२…
६ असार २०७८, 5:34 am
जर्मनीले साबिक विजेता पोर्चुगललाई हराउँदै नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावनालाई कायम राखेको छ । शनिबार भएको खेलमा जर्मनीले पोर्चुगललाई ४–२ गोलले हराएको हो । खेलमा अग्रता भने पोर्चुगलले लिएको थियो । खेलको १५ औँ मिनेटमा…
५ असार २०७८, 8:15 pm
प्रायोजकहरूले उपलब्ध गराएका पेय पदार्थका बोतल खेलाडीले वरपर सारेमा सम्बन्धित टिममाथि जरिवाना हुन सक्ने युइएफएले जनाएको छ । यसअघि सोमबार रोनाल्डोले कोकाकोलाका दुईवटा बोतल हटाउँदै मानिसहरुलाई पानी पिउन प्रेरित गरेका थिए भने पाउल पोग्वाले बियरको…
४ असार २०७८, 11:09 am
विश्वका धनाढ्य फुटबलको को होलान् ? धेरैलाई मेसी, रोनाल्डो वा नेइमार भन्ने लाग्ला । तर, विश्वका धनाढ्य फुटबल युरोप वा दक्षिण अमेरिका नभएर एशियाका हुन् । फेइक बोलकिया अहिले २३ वर्षको भए र उनी पोर्चुगलको…
३ असार २०७८, 8:15 pm
खेलकुदको दुनियाँमा यो ठूलो उपलब्धिमध्येको एक हो । यस ग्रहकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमा कसरी एउटा सानो देश पहिलो वरीयताको टोली बन्यो ? मात्र १ करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको, फ्रान्स र जर्मनीले घेरिएको पश्चिम ली…